Monday August 05, 2019 - 12:29:50 in Wararka by
Tobanaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay bartamaha magaalada Al Qaahira ee caasimadda wadanka Masar.
Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Masar ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 qof oo shacab ah ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhashay gaari nuuca raaxada ah xilli uu marayay meel ku dhow Machadka Al-Awram ee bartamaha magaalada Al Qaahira.
Khaalid Mujaahid oo u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in 4 kamid ah 56-da qof ee ku dhaawacantay qaraxa ay xaaladooda caafimaad aad uliidato.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhashay gaari si xowlli ah ku socday oo ku dhacay gaari kale taas oo sababtay in gaadiid badan ay ku gubteen wadada Koorniish Niil oo ah mid aad u mashquul badan.
Sawirro lagu baahiyay baraha Internet-ka ayaa muujinayay gaadiid badan oo wadada hareeraheeda ku gubanaya, warbixinnadii ugu dambeeyay ee kasoo baxay baaritaanno ay sameeyeen ciidamada Booliska xukuumadda Masar ayaa muujinaya in qaraxu uusan ka dhalan weerar balse uu ka dhashay gaadiid isku dhacay kadibna qarax sameeyay.